EBurundi: UNolla ubonisa amadoda awayecele amalahle iMboniselo
ABEMI 1 082 464 150
ABAVAKALISI 1 453 694
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 3 688 959
EBenin: UDésiré usebenzisa irediyo edlala izinto ezirekhodiweyo kwisithuthuthu sakhe esikhwelisa abantu ukuze beve iindaba ezilungileyo
Izithuthuthu ezithutha abantu, ezibizwa ngokuba ziizem, yindlela yezothutho ethandwayo kwizixeko ezikumzantsi weBenin. UDésiré, uvulindlela ongumncedani, wafaka irediyo edlala izinto ezirekhodiweyo kunye nezandisi-lizwi ezibini ezijonge apho umkhweli ahlala khona kwizem yakhe. Usoloko edlala iimpapasho ezirekhodiweyo kunye nemidlalo yeBhayibhile. Kuthi kungelo xesha lide umntu ekhwele, abe sele emamele ngomdla. Abaninzi baye bangafuni nokuphazanyiswa de kube nzima nokwehla bakufika kwiindawo abaya kuzo, befuna ukuba ide iphele loo nto bayimameleyo. UDésiré uthi: “Bendingathanda ukuba bahlawule baze behle ukuze ndikhwelise abanye abantu, kodwa ndiyazi ukuba ukuva kwabo iindaba ezilungileyo kubaluleke ngaphezu kwemali. Ngapha koko, nam nditsho ndihambise iincwadi ezininzi.”
Intwazana Engazange Incame
UNolla yintwazana eneminyaka emithandathu ekhaya layo likwiinduli zaseBurundi. Ngenye imini, ngoxa le ntsapho yayipheke ngestovu samalahle, kwafika amadoda amabini awayesebenza elumelwaneni, acela amalahle ashushu ukuze abase umlilo. Afika uNolla ongekaqalis’ isikolo ekhwezela umlilo. Wawavumela ukuba athathe amalahle ambalwa. Kungaphelanga mizuzu ingako, uNolla wadlula ngakula madoda waza wabona ukuba ayelayite icuba ngamalahle akhe. Kwamkhathaza kakhulu oko, waza wathi, “Ukuba bendazile ukuba nizolayita icuba, ngendinganinikanga amalahl’ am.” Wakhumbula ukuba eHolweni yoBukumkani ebebone imagazini enomfanekiso wecuba ngaphandle. Wabaleka waya khona, wathatha iiMboniselo ezimbini zikaJuni 1, 2014 ezazithetha ngokutshaya. Wabuyela kula madoda, wawanika ezo Mboniselo, waza wathi mawazifunde ngoko nangoko. Waphinda wadibana nawo waza wawanika izimemo zendibano yengingqi eyayiza kubakho. Emangaliswe kukungancami kwale ntwazana, aya iintsuku ezimbini zendibano. Ngexesha lekhefu, uNolla wawabona waza wawamema ukuba azotya nentsapho yakowabo. Ayithanda kakhulu into awayibona nawayiva endibanweni, kangangokuba aqalisa ukufunda iBhayibhile.
Abadala baseLiberia bashumayela ngoBukumkani ezintolongweni. UYves, uvulindlela okhethekileyo kwidolophu elikomkhulu, iMonrovia, uthi: “NgoMatshi amabanjwa amathathu aye aba ngabavakalisi abangabhaptizwanga. Ngoku kukho abavakalisi abathandathu eMonrovia Central Prison.” Baya njani entsimini? UYves uthi: “Baba nengxubusho yentsimi qho ngoLwesithathu nangoMgqibelo. Emva koko, baye bavunyelwe ukuba baye kwisisele ngasinye bachazele amabanjwa ngamathemba aseBhayibhileni.” Ngoku amabanjwa amaninzi aqhutyelwa isifundo seBhayibhile yaye ayaya kwiintlanganiso eziqhutyelwa entolongweni. Kwenye yezo ntlanganiso, ummeli wesebe wanikela intetho yesidlangalala kumabanjwa ayi-79. Nezinye iintolongo ezintandathu ziba neeklasi zokufundisa iBhayibhile yaye kwezo ntolongo kuyabonwa ukuba ziyatshintsha izimilo zamabanjwa.
“Sidinga Uncedo Ngokukhawuleza”
Kwenziwa imigudu ukuze kuncedwe abantu abasemaphandleni bakwazi ukuya kwiSikhumbuzo. Ngokomzekelo, abaThwa ngabemi bokuqala kumazantsi eAfrika. Babephila ubomi obulula, bemane befuduka bezingela izilwanyana zasendle nokutya. UGlenn, uvulindlela okhethekileyo okhonza kumntla weNamibia, walungiselela ukuba iSikhumbuzo sika-2015 sibekho kwilali esemaphandleni yabaThwa, ekwiikhilomitha eziyi-270 kwimpuma yeRundu. Yayikokwesibini kusibakho iSikhumbuzo apho. Kuwo omabini la matyeli, abasemagunyeni bavumela amaNgqina kaYehova ukuba asebenzise inkundla kamantyi ngaphandle kwentlawulo. Bayi-232 abantu abezayo nangona kwakusitsho izantyalantyala zemvula ngaphambi nasebudeni beSikhumbuzo. AbaThwa balapho bathetha isiKhwe, ulwimi lwesiqhakancu. Le ntetho yesiNgesi yayitolikwa ngesiKhwe. Ngenxa yokuba ingekho iBhayibhile ngolo lwimi, kwakusetyenziswa imifanekiso ukucacisa iivesi ezinjengoIsaya 35:5, 6. UGlenn, oqhuba izifundo zeBhayibhile ezinenkqubela ezininzi apho uthi: “Bendisoloko ndityelela apha kanye ngenyanga kule minyaka mibini idlulileyo. Ndiye ndigxumeke intente iintsuku ezimbalwa. Abantu bayacotha ukwenza inkqubela ngenxa yolwimi nokuba behlala kude. Sidinga uncedo ngokukhawuleza. Xa bendiye kwabasemagunyeni ukuze ndilungiselele iSikhumbuzo salo nyaka, ilungu lekomiti ephetheyo licele ukuba sakhe indawo yokunqulela apho. Lathi ikomiti iza kusinika umhlaba ize ihlawulele neendleko zokwakha! Ekwakufuneka sikwenze thina kukuza nomfundisi okanye siqeqeshe omnye wabo abe ngumfundisi!”
ENamibia: Abavakalisi ababini bashumayela kwibhinqa elingumHimba